PressReader - Ilanga: 2017-10-05 - Iyadida eyesalukazi noMasipala weTheku
Iyadida eyesalukazi noMasipala weTheku
Ilanga - 2017-10-05 - Imibond -
IYADIDA indaba kaNkk Martha Molefe (76) ILANGA elilobe ngaye ngoMsombuluko okuvela ukuthi ukweleta uMasipala weTheku imali engaphezulu kukaR34 000 angayazi ukuthi ngeyani njengoba uma eya kwamasipala utshelwa lokhu nalokhuya. UNkk Molefe uthi usegqigqe kwaze kwaguga imbadada ezama ukulungisa lolu daba. Uthi utshelwe ukuthi lesi sikweletu kungenzeka ukuthi ngesamanzi avuzayo, wafuna abantu ukuba bambhekele ukuthi ngempela kunjalo na, kodwa wathola ukuthi kakunjalo.
Uphinde watshelwa ukuthi ngesegceke lakhe ngoba likhulu. Lokhu sikubuka njengehlaya ngoba uNkk Molefe uhlala endlini yomxhaso, kasikaze sizwe ukuthi iziza zalezi zindlu ziyakhokhelwa, kube kunjalo nje, yisalukazi lesi esihola impesheni. Lokhu kwenza sibone ukuthi kulo masipala kunabantu abangazi ukuthi umsebenzi wabo yini. Kakukwazi ukuthi umuntu omdala angalokhu egqigqa khona kwabona abakwamasipala bangazi ukuthi njengoba ekweleta ukweletani.
Eyokuthi nje imali ngeyegceke lakhe ngoba likhulu, yinsumansumane nje yembudane. Uma lo masipala ukwazi ukuhlela imicimbi efana ne-Essence Festival Durban ngezigidi zamarandi, umoshe imali ngokuhlela imicimbi kodwa ibhutshe ngemizuzu yokugcina, uhlulwa yini ukulekelela isalukazi esesinyukelwa wushukela ngenxa yovalo lokuthi uma singakhokhi singase sigcine sithathelwe indlu yaso silale emnyango?
Lokhu kwenza sibuke ukuthi kunabantu abaqashiwe nje ngoba nakhu befuna ukuhola kumasipala kodwa umsebenzi wabo kabanendaba nawo. UNkk Molefe uze uthola ukuthi ukweleta le mali nje, ubefuna ukudayisela indodakazi yakhe lo muzi. Uhlangane nezimbila zithutha ziholwa ngemhlophe phambili uma esefika kwamasipala etshelwa ukuthi ngeke akwazi ukuyidayisa, kumele akhokhe lesi sikweletu.
Uke wathenjiswa ukuthi sizokwesulwa, kuthe uma eqhubeka namalungiselelo okudayisela indodakazi, watshelwa ukuthi makakhohlwe ngoba akakakhokhi futhi isikweletu siyenyuka. Yena-ke umuntu osuke esiza uNkk Molefe lapho kwamasipala, ucabanga ukuthi lesi salukazi sizoyithathaphi imali engaka - siphila ngempesheni - noma ufuna khona ukuthi singakwazi ukuwudayisa umuzi waso sigcine sibulawe wumfutho wegazi ophezulu bese umuzi uthathwa bhusende yizigebengu - njengoba vele kuhlale kubikwa ukuthi ngisho amakhansela ayazenzela ezindlini zomxhaso ezisuke zakhelwe abantu?
Siyezwa impela uMnu Mthunzi Gumede okhulumela iMeya yeTheku, uNkk Zandile Gumede, ethi kabakugqugquzeli ukuthengiswa kwalezi zindlu, siyavumelana naye kodwa-ke kayikho yini into engenziwa ukusiza uNkk Molefe ngokushesha, ukuze akwazi ukuphila ngaphandle kwengebhe edalwa yilesi sikweletu? Ukube nje besekuyisikhathi sokhetho, kasingabazi ukuthi bekuzobonakala ngohide lwezimoto luyozama ukulekelela uNkk Molefe ukuba aphume kulesi sikweletu.
Kakuyena yedwa uNkk Molefe onenkinga efana nalena nezinye ezahlukene ebezingalungiswa ngokuphazima kweso - uma umasipala ukwazi ukuchitha imali uhlela imicimbi ezogcina ingenziwanga kodwa sebekhokhelwe abantu okufanele babe yingxenye yayo.
Kunemindeni ngaphansi kwalo masipala edla imbuya ngothi kodwa imali isetshenziswa ezintweni ezingawusizi ngalutho umphakathi. Siyazi ukuthi imicimbi emikhulu iyalekelela ekumaketheni iTheku kodwa sibona kungasizi ukukhangisa ngento enamachashazi okungcola.
Umasipala ake uqale ushanele amalawu namaxhiba awo ngaphambi kokumema abantu ukuba bazozitika ngenkece egameli lokuwumaketha. Makunakekelwe abantu, izisebenzi ezihlulwa wumsebenzi wazo zigudluzwe.
Uphinde watshelwa ukuthi ngesegceke lakhe ngoba likhulu...